किन भएन यिनलाई कुरीकुरी ? युवालाई छैन, बूढालाई खात !
काठमाडौं, २८ कार्तिक । संसद्को गरिमासमेत राख्न नसक्ने, रातो पासपोर्ट बेच्नेदेखि भ्रष्टाचार गर्न सक्रिय हुने र सक्रिय गराउनेलाई छान्दै दलका नेताले पार्टीका कार्यकर्तालाई लोप्पा दिए । भ्रष्टाचारी र तस्करहरुलाई छानी–छानी समानुपातिक संसद्को सूचीमा राख्दा उनीहरुले लाज मानेनन् ।
यहाँ कुनै वाद र सिद्धान्तले काम गरेन । माओवादीमा परिवारवाद त्यो पनि प्रचण्ड गुटमा यस्तो देखियो । एमाले र नेकांमा त्यस्तै छ । काठमाडौंमा पार्टी अध्यक्ष लेखनाथ न्यौपानेले संसद्को टिकट पाएनन् । तर टोखा नगरको मेयर पदमा चुनाव लडेर जमानत जफत गराउने दीनानाथ शर्माकी पुत्री कल्पना शर्मा समानुपातिकमा परिन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डले छोरा र श्रीमतीबाहेक सबैलाई सांसदको सेरोफेरोमा राखे । वर्षमानले श्रीमती र बहिनीलाई छुटाएनन् । माइली बुहारीको बिजोड बनाउने, नातिको जन्मदर्ता नगर्ने सर्वहार वर्गका नेता प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहाललाई आफैंले रोजेकी बुहारीमाथि दया नजाग्दा महिला अधिकारको गीत गाउने माओवादीकै नेतृहरु शशी श्रेष्ठ र पम्फा भुसालहरुलाई कुरी कुरी किन लागेन ?
पार्टीका नेताहरु रामबहादुर थापाले चुनाव लड्ने ठाउँ पाएनन् । पार्टीको लागि भाषण कलाबाट विपक्षीको दोहोलो काड्ने लीलामणि पोखरेलले ठाउँ पाएनन् । अखिल अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गरेर पराजय भोगेका अनिल शर्मा जनार्दनको भाई हुनुको मज्जा क्षेत्र नं. १ मा टिकप पाए ।
अखिलको राजनीति गरेका शर्माको ठाउँमा लेखनाथले स्थान पाउनु उचित थियो । ०७० को चुनाव बहिष्कार गर्दा आफ्ना कार्यकर्ताको भोट माओवादीविरोधी एमाले र नेकांलाई बेचेकाहरुलाई यस पटक जनताबीच आफूलाई त्यही ठाउँका जनतासँग मत माग्न कति हीनताबोध हुँदा हो ?
पार्टी एकताबाट आएका रामबहादर थापा, पम्फा भुसाल, देव गुरुङ, हितमान शाक्यहरुले यो यथार्थ बुझ्नुपर्दछ कि पर्दैन ? यीमध्येका गुरुङ त अत्यन्त जातिवादी नेतामा पर्छन् । जसले वर्गभन्दा जातलाई जोड दिन्छ । लोग्ने प्रत्यक्षमा भए स्वास्नी समानुपातिक कोटामा नाम सिफारिस गर्दा मसाल त्यागेर माओवादी बन्दाको फल बाग्लुङका दीनानाथ शर्माले लिए ।
शिक्षामन्त्री बन्दा भ्रष्टाचार गर्नु छोरी कल्पना, छोरा साजनलाई पैसा उठाउन खटाउनु, दीनानाथ जस्तो माओवादीको अधिकारमा पर्छ कि पर्दैन, त्यो भने टोखा नगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवार बनेर पछारिँदा पनि समानुपातिकमा सिफारिसमा परेकाहरुलाई सोध्नुपर्छ ।
त्यो माओवादी नेताका आफन्तको खेल मैदान भन्नै पर्छ । अबको माओवादी र प्रचण्डको गुटका लागि न त कार्यकर्ता जरुरत पर्छन् न त समर्थक शुभेच्छुकहरुको आवश्यकता पर्छ ।
जनाधार भएको ठूलो पार्टी नेकपा एमालेमा पार्टी मिसाएपछि नेताहरु प्रचण्डपथका सबै दलालहरुको दिन आएको ठान्नुपर्छ । बदनाम र हरुवाहरुले सबैतिर ओगटेको बेला राजनीतिक सिद्धान्त चितामा राखेको लाससरी हुने त होइन ? अब कसैले आदर्श र सिद्धान्तको खोजी गर्ला ?
जातिवादका यी हस्ती !
कम्युनिस्ट पार्टीहरुले वर्गीय धरातल छाडेका छन् । विरोधीको पैसामा जातिय अहङ्कारमा जाँदा ब्राम्हण–क्षेत्री, दशनामीबाहेक जनजाति आदिवासी, दलित, पिछडावर्ग, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यकको नाममा जे–जति चलह–पहल संविधानसभामा भयो, त्यस बखत युरोपेवली युनियनका दलाल बनेकाहरु धुरन्धर क्रान्तिकारी बनेका थिए ।
एमाले एनजीओ र आईएनजीओबाट विदेशी पैसा भित्र्याएर कार्यकर्तालाई कम्युनिस्ट आचरण र दर्शनबाट विमुख गराउने र विपक्षीमाथि कटाक्ष हुने गरी बरबराउँदै गर्दा कांग्रेसको सती गयो । दश वर्षे जनयुद्धका बेला समाजिक परिवर्तन, वर्गीय हितको कुरा गर्ने माओवादी अहिले एमाले जस्तो भइसक्यो ।
माओवादीका नेताहरु देव गुरुङ, सुरेश आले अन्यन्त जातिवादी हुन् । जातिवादी प्रवृत्तिकै कारण देव गुरुङ आफ्नो जन्मथलो लमजुङबाट झरेर चुनाव लड्दै छन् भने सुरेश आले समानुपातिक कोटामा थन्किएका छन् । तनहुँ एकका जनता उनीप्रति आक्रोशित छन् ।
गुरुङले ०६४ सालमा चुनाव जितेको मनाङमा सिन्को भाँचेनन् । अहिले उनकै कारण माओवादी पक्षका दर्जनौं कार्यकर्ता कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । तिनकै डरले देव गुरुङ वाम गठबन्धनको सारथी बन्दै लमजुङमा उम्मेदवार भएका छन् ।
मनाङको स्याल लमजुङ झर्यो भन्ने मनाङेहरुले राजधानीमा गुण्डाराज चलाएका दीपक मनाङेलाई उम्मेदवारको रुपमा देख्नुपरेको छ । त्यो पनि वाम गठबन्धनको नाममा । पैसाले राजनीति ध्वस्त पार्ने नेता हुन् ।
२०७० सालमा माओवादीविरुद्ध एमाले र कांग्रेसलाई भोट बेचेका सुरेश आले, देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, हितमान शाक्यलाई यसै पटक चुनावमा उठ्नु किन परेको ? २०७० को घाउ परिएकै छैन । उनीहरुलाई सांसद बन्नुपरेको छ ।
युवालाई छैन, बूढालाई खातमाथि खात
नेपाली कांग्रेसमा युवालाई पार्टी नेतृत्वमा पुर्याउने त भनियो, ५–७ जना युवाहरु पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पदमा चुनाव लडेर जितेका पनि छन् । तर राज्यको केन्द्रीय तहमा सहभागी हुनका लागि सांसद बन्नुपर्छ, त्यो सांसदका लागि संसदीय समितिले शेरबहादुर देउवाले विधान हेर्दैनन्, देशको कानुन मान्दैनन भन्ने कुरा बारम्बार देखाउँछन् ।
नेपालमा प्रशासनिक सुधार सुझाव आयोगले २१ जनाभन्दा बढी मन्त्री नबनाउन सुझाव दिन्छ तर लोकतन्त्रका पर्याय बनेका डा.बाबुराम भट्टराईले ५४ जनाको मन्त्रिमण्डल बनाए । डा.भट्टराईको रेकर्ड बराबरको मन्त्रिमण्डलले कांग्रेसका शेरबहादुरलाई पुगेन ।
पार्टी विधानविपरीतको १४ जनाको संसदीय बोर्डलाई देउवाले २७ जनाको बनाए । चुनाव घोषणा भएको अवस्थामा संसद्को सञ्चालन समाप्त भएको अवस्थामा देउवाले ६४ जनाको मन्त्रिमण्डल बनाएका छन् । त्यस्तो चरित्रले नेपाली कांग्रेसमा युवा जनशक्तिको सम्मान कसरी गर्छ ?
यस पटक टिकट वितरण गर्दा छुटेका युवाहरु कल्याण गुरुङ, सुरेन्द्र पाण्डे, बद्री पाण्डे, धनराज गुरुङ, गुरु घिमिरे, किरण पौडेल, रामकृष्ण चित्रकार, महेन्द्र शर्मा, केशव सिंह, मनमोहन भट्टराई, टेकराज बजाल, विष्णुदेवी पुडासनी, नवीन चित्रकार जस्ता दुई दर्जन युवाहरु कहीँ छनोटमा परेनन् ।
बद्री पाण्डे विगतमा समानुपातिक सांसद थिए भने धनराज गुरुङ संविधानसभाको दोस्रो चुनावमा स्याङ्जाबाट जिते । त्यो बेला हार्ने डरले गोपालमान समानुपातिकमा बसे । चुनाव जितेका धनराजले मन्त्री पाउने कुरै थिएन । तर गोपालमान शेरबहादुर देउवाको सम्मानित उपप्रम भएकै छन् ।
रामचन्द्र हुन् वा देउवा यिनीहरुलाई सबैतिर सबै थोक जरुरी भयो । युवाहरुलाई ठाउँ भएन । गुटवाद कांग्रेसमा रोग हो । देउवा र रामचन्द्रको गुटवाद उम्रिएका चमेराहरु कृष्ण सिटौला, प्रकाशमान, विजय गच्छदार त छँदै छन्, तीभन्दा बलियो भए डा.शेखर, डा.शशांक र सुजाता ।
कोइराला वंशका सदस्य भएकाले यिनीहरुलाई रामचन्द्र र शेरबहादुर देउवाले बाइपास गर्न सक्दैनन् । देख्दा पौडेल र देउवा गुटका युवाहरुलाई कतै स्थान छैन, ताजा खबरमा उल्लेख छ ।
त्यस्तो कांग्रेसले गणतान्त्रात्मक सत्ताकालका बेला राजतन्त्रको दुहाइ दिने कमल थापालाई बोकेर कसरी लोकतन्त्रको रक्षा गर्छ र वाम गठबन्धनकलाई अधिनायकवादी भन्दैछ । कांग्रेसभित्र यो टिप्पणीको प्रतिवाद डा.शशांक र शेखरले गरिरहेका छन् ।